China ZAZE Petro-chemical Usoro mgbapụta-1 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Convista
Onye nchekwa, nchekwa nchekwa ike na nchekwa gburugburu ebe obibi
Kpọọ Nkwado 0086-15811508066
Email Nkwado sales@convistafc.com
Mmanụ na Gas Pipeline Valves
Nụchapu & Valves
Ogwe Ike ọdụ
Mmiri System Valves
Ndị ọrụ nchekwa & nzacha
Y Stdị Mmetụta
Nkwonkwo Mgbasa Rubber
MJ Series raygba Mmiri Mmiri Valve
MX Series Opekempe Flow Circulation Valve
SY Series igbapu valvụ
Mkpuchi Mmechi Nchekwa
Axial Pressure na-achịkwa Valve
ZAZE Petro-chemical Usoro mgbapụta-1
Anyị, dịka usoro nhazi na imepụta nke API61011th Centrifugal Pump for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Sectors, zụlite usoro ZA / ZE usoro nfuli mmiri.
Isi mgbapụta ahụ, dị ka ụdị nkwado, kewara abụọ owuwu: OH1 na OH2, na impeller bụ nke na-emeghe na-emechi owuwu.
N'ime nke, ZA bụ nke OH1, emechi impeller; na ZAO sitere na OH1, nke mepere emepe;
ZE bụ nke OH2, nwere nke mechiri emechi, yana ZE0 bụ nke OH2, mepere emepe.
Ejiri ZE mgbapụta, dị ka ọkwa nrụgide, dị ụzọ atọ: D, Z na G (D na-akpọkarị aha) maka ọnọdụ ọrụ.
Ọ na-ahụ ngwa dị ukwuu na ọnọdụ njem nke nnukwu ma ọ bụ ọkara nrụgide dị ọcha ma ọ bụ ihe dị iche iche, na-emebi emebi ma na-eyi ihe maka ọrụ ndị dị ka nchacha mmanụ, ụlọ ọrụ kemịkalụ ọkụ, ụlọ ọrụ mmanụ, kemịkalụ kemịkal nnu, nchebe gburugburu ebe obibi, mpempe akwụkwọ na akwụkwọ, ịkọcha mmiri mmiri, ịgwọ mmiri na ịcha igwe, ọkachasị njem na-achọ nrụgide dị elu, nsi, ọkụ ọkụ, ihe mgbawa, na ihe na-emebi emebi na ngalaba dị ka ngwa olefin, ionic membrane caustic soda, nnu nnu, fatịlaịza, ngwaọrụ osmosis. , imetọ mmiri mmiri, MVR na nchekwa gburugburu ebe obibi, wdg, na-egosi ike pụtara ìhè.
Na-asọ: Q = 5 ～ 2500m3 / h Isi: H ≤ 300m
EZE (ZEO) Z
EZE (ZEO) G
-30 ≤ ≤T≤150 ℃
Eg ： ZEO 100-400
ZEO -------- ZE mgbapụta usoro koodu
O ọkara imeghe impeller
100 -------- Obosara ntaneti: 100 mm
400 -------- Nomba aha nke impeller: 400 mm
1. Rigidity na ike na-ọma nke ukwu site optimizing imewe nke shafting. Nke a gosipụtara nkwalite ntụkwasị obi nke ọma, na-ekwe nkwa ọ bụghị ogologo ndụ ọrụ ma belata ụgwọ ọrụ.
2. A na-ekepụta anụ ahụ ka ọ bụrụ akụkụ abụọ maka ịjụ oyi site na mmiri na obi jụrụ. N'ihe dị ka ihe karịrị 105 ℃, ọ na-atụ aro ka a kwadebere gị usoro mmiri jụrụ oyi, nke na-ebelata ọnọdụ okpomọkụ nke iburu site na iji mmanu mmanu dị jụụ maka ebe ọrụ ka mma;
3. Igwe nkpuchi mgbapụta ahụ nwere oghere dị jụụ, nke na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ nke igwe akuku igwe dị ala site na ime ka oghere ahụ dịkwuo ogologo ndụ.
4. A na-ekpochi akụ na-agbapụta mgbapụta site na iwebata onye na-asacha onwe ya nke German. Ekele maka onye na-asacha ya, mkpụrụ ahụ anaghị atọghe ma ọ bụrụ na ntụgharị mgbapụta ma ọ bụ ịma jijiji. Nke ahụ pụtara na mgbapụta ahụ chọrọ ọrụ chọrọ obere na ọnọdụ nrụnye.
5. Igwe nfuli ndị a buru ibu na-egosipụta ozu ụlọ abụọ, nke emebere iji dozie ike radial emepụtara n'okpuru ọnọdụ ọrụ na-enweghị ọrụ. Na mgbakwunye, ọ na-achọ ike axis nwere ike iji mgbaaka akara na oghere itule.
6. formsdị ụdị nke Mechanical sealing dị ka njikọta ọnụ, otu-terminal ma ọ bụ okpukpu abụọ, yana dakọtara inyeaka akara usoro nwere ike iji dị ka ọkara ga-ebu, ka o wee mee ka akara na jụrụ kwenye. Akara na ịsa ahụ ga-eme dị ka API682. Enwere ike ịhazi akara mgbapụta mgbapụta dịka ihe ndị ọrụ chọrọ si dị.
7. The aro na-nyere spanner nzọụkwụ, nke na-achị si ukwu na-emeso impellers, n'ihi na elu ọrụ arụmọrụ na echichi na dismantling.
8. Site na njikọ diaphragm agbatị, mgbapụta ahụ achọghị ka ọ ghara ịkụsa piping na sekit maka nhazigharị na mmezi nke igwe dum.
Nke gara aga: ZAO Solid Picle Pelizipụ mgbapụta
Osote: Mgbapụta Zirconium
SRBA (SRB) ụdị nyo
Spring n'elu obere inwego ụdị na menjuobi nchekwa v ...
T ụdị nyo
Spring-kwajuru full-mụụrụ ụdị na menjuobi nchekwa ...
9110 Njikọ Ugboro Ugbo Ala Maka Mmiri Mmiri
A na-arara CONVISTA maka nyocha na ịnye ụdị ọrụ nchịkwa ọ bụla dị ka Valves, Valve actuation & Controls, Nfuli na akụkụ ndị ọzọ metụtara & ihe dịka Flanges & Fittings, Strainers & Filters, Joint, Flow Mita, Skids, Nkedo & ibe ihe wdg.
CONVISTA mepụtara Para ...
CONVISTA na-enye integrati ...
KWES approvedR approved kwadoro site na nri ...
CONVISTA nyere nkwekọrịta t ...
Valves maka nnukwu nsogbu hy ...
Nkedo Steel Ugboro abụọ Eccentric Butterfly Valve, Ugboro abụọ Ekwuru Okwu Butterfly Valve,